Chefs Ary Head Cooks Job Description / Accountability Template sy Zavatra Ataony – JobDescriptionSample
Home / Chefs Ary Head Cooks Job Description / Accountability Template sy Zavatra Ataony
superadmin Jona 28, 2016 Uncategorized Leave a comment 40 Views
Direct, ary afaka mandray anjara amin'ny ny fanomanana, anana, sy ny fanomanana ny muffins trondro, hanina, legioma, salady, na sakafo fanampiny. Enga anie hiomana sy ny vidiny fifantenana entana, mividy entana, ary foana tahirin-kevitra sy kaonty.
Job Skills Mila
Diniho vonona na sakafo manta vokatra’ kilasy mba hahazoana antoka fa fepetra no tratra.
Manara-maso ny fanadiovana tapaka mba hahazoana antoka fa manaraka andrasan'ny mpiasa sy ny lalàna.
Hanamarina kalitao sy ny be ny nahazo entana.
Fangatahana na mividy sakafo na zavatra hafa ho zava-dehibe ilaina mba hanomezana toky procédure izay nahomby.
Manara-maso na handaminana tapaka ny mpiasa na mpahandro miasa amin'ny fanomanana sakafo.
Miasa faritra mba hanao sasany, fitaovana, na maso vatsy ho voaporofo fepetra conformance.
Manapa-kevitra ny fomba tokony nampiditra sakafo sy hiteraka sakafo lafin-javatra izay haingon-trano.
Asehoy ny mpahandro na ny mpiasa izay ao amin'ny fanomanana fanampiny, mahandro sakafo na ny fampisehoana ny foodstuff.
Kajy be sy ny vola lany ny tena ilaina dia manome, toy ny ohatra sakafo sy singa.
Miara-miasa amin'ny mpiasa hafa izay handray an fiheverana toy izany na dia singa toy ny mety ho habetsaky ny mpanjifa na ny fotoana safidy ny singa hanaovana drafitra sy hahazoana fomba fanamboarana na ny voafantina.
Diniho lovia hizara ny vidiny mba Menus zavatra, araky ny sakafo, asa, sy ny fandaniana lany.
Miomana ary hanao sakafo isan-karazany, matetika angamba mihoatra ny fototra na ny momba ny mpitsidika na toetra manokana.
Manapa-kevitra Output ambain-dain'ny fandaharany sy ny mpiasa ilaina fepetra arahana mba hahazoana antoka tsy tapaka ny asa.
Mahazoa ary hanakarama mpiasa, toy ny mpahandro sy ny mpiasa an-trano koa ny hafa.
Hihaona amin'ny mpanjifa mba hankany karazan-tsakafo ho an'ny toe-javatra manokana izay, toy ny ohatra fampakaram-bady, antoko, na ny fanasana.
Asehoy vaovao fanao mahandro sakafo na entana ny mpiasa.
Mitenena fidiram-bola reps hiresaka vola na ny fividianana entana.
Request fanamboarana na ny fitaovana mahazo.
Report famoronana na vaovao momba ny tsipiriany isan-karazany izay nomena.
Miomana, Kilonga, na hanara-maso ny foodstuff Prep na mahandro asa maro na ny lakozia eateries amin'ny fananganana toy ny ohatra ny rojo Fisakafoanana hariva, hopitaly, na Motel.
Co-ordinate fandrindrana na mahazo sakafo ho an'ny rehetra ny fomba fiasa ao anatin'ny raharaham-barotra, anisan'izany fikambanana, Motels, na ny rojo Cafe.
Asa Actions fahaizana
Fahazoanao ny hevitr'izay vakinao-Tsy Mahalala Tsara namorona afa-po sy ny andalana ao amin'ny asa mifandraika amin'ny antontan-taratasy.
Fahaiza-mihaino-Inona hafa-olona hoe manome hifantoka, ny fahazoana ny fotoana mba hamantatra ny hevitra ho vokarina, nanontany fanontaniana toy ny marina, fanotofana fa tsy amin'ny toe-javatra ratsy.
Publishing-miresaka mahomby voasoratra teo fa tsy mba tahaka ny tsy mety ho fepetra ny mpijery.
Miteny ny miresaka amin'ny hafa mba hampita zava-misy effortlessly.
Technology-ny fampiharana fomba siantifika sy tari-dalana mba hamahana olana.
Nihevitra izay mitsikera-Mampiasa niady hevitra sy ny antony mamantatra fatiantoka sy ny fahaiza-manao ny fomba, vokatra na ny mpisolo toerana valim-fahoriana.
Fahatakarana ny Fianarana Active-baovao vaovao momba ny tombontsoa sy ny amin'izao fotoana izao na ho avy problemsolving sy ny fanapahan-kevitra.
Ny fianarana fomba-maka sy ny fampiasana coachingPEReducational tetikady sy fomba fiasa mety tsara ho an'ny toe-javatra manokana, na rehefa mahafehy fanabeazana olana izay vaovao.
Fanaraha-maso-OverseeingOREvaluating fanatanterahana-tena, ry namana izay hafa, na orinasa mandray asa fanitsiana, na mamokatra enhancements.
Social fidirana-nahalala othersA valin raha manao ny antony izy ireo ary rehefa mahalala.
Fandrindrana-manova fihetsika raha oharina amin'ny asa othersI.
Salesmanship-mahomby hafa mba hanova ny sainy na ny asa.
Fifampiraharahana-hamonjy ny hafa miaraka sy miezaka ny hampihavana variances.
Fampianarana-Naniraka olon-kafa fotsiny ny fomba hanaovana ny hetsika.
Company Orientation-antoka mitady paikady mba hanampiana ry namana.
Advanced Problemsolving-Famantarana olana be pitsiny sy nandinika fampahalalana manan-danja izay mandinika sy hampivelarana vahaolana azo atao sy ny fampiharana.
Raharaham-barotra Evaluation-Fandinihana zavatra ilaina sy ny zavatra fepetra arahana mba hanao fisehon'ny.
Teknolojia Design-Teknolojia hanompo mpanjifa sy ny fampifanarahana fitaovana na mamokatra faniriana.
Gear Selection-hanapa-kevitra ny karazana fitaovana sy ny fitaovana nanana ilaina ny hanao ny asa.
Fametrahana-fametrahana milina, fitaovana, tariby, na ny fandaharana ny hihaona fepetra arahana.
Programming-Manoratra momba ny solosaina fonosana tanjona maro.
Fanaraha-maso asa-Topy Maso Eran antso, gauges, na famantarana hafa mba ho azo antoka ny fitaovana misy manao araka ny tokony ho.
Operation sy Hazavao-Fehezo asa ny fitaovana na fitaovana.
Fitaovana Maintenance-manome fikojakojana izay fahazarana eo amin'ny fitaovana sy ny manapa-kevitra raha.
Fanamboarana-Famantarana antony glitches fandidiana sy ny fisafidianana toy 'zao momba izany.
Manamboatra-manamboatra fandaharan'asa na fitaovana mampiasa ny fomba izay ilaina.
Quality Control Evaluation-tsainy-fahavitana fanadinana sy ny taratasim-bola ny zavatra, tolotra, na miasa mba hijerena fahombiazana na toetra.
Ny fahendrena sy ny fandraisana fanapahan-kevitra-jerena soa sy ny mampitaha vidin ny fepetra izay mety ho hisafidy ny tsara indrindra mifanaraka iray.
Systems Analysis-manapa-kevitra ny fomba fanitsiana ao amin'ny habakabaka, asa, ary ny toe-javatra dia mety hisy fiantraikany vokatry ary inona no karazana teknika dia tokony hanatanteraka.
Systems Evaluation-Famantarana ny fepetra na ny famantarana ny fampisehoana ary koa ny mikasika ny nofinofy ny rafitra ankavanana, na ny asa ilaina mba hanatsarana ny fahombiazan'ny.
Timemanagement-mizara tsara ny fe-potoana manokana ary koa ny olon-kafa’ fe-potoana iray.
Fitantanana ny tahiry-mamaritra ny fomba mandeha ny vola ho lany mba hahazoana ny asa vita, sy ny tamin'ny fanaovana kaonty momba ireo fandaniana.
Asa ny Product Ananana-mahita sy mahazo ny marina ny toerana fampiasana ny fitaovana, ary ny vokatra nanana fitaovana ilaina ny manao lasa mihamatanjaka ny asa.
Fanaraha-maso ny mpiasa Resources-mandrisika, trano, ary nanondro ny olona tsirairay, rehefa miasa, famantarana ny ambony noho ny asa ry namana.
Fepetra fanabeazana Knowledge fahaizana
Affiliate ny vola (na fanampiny ROA-yr vola)
Senior High School Degree (na GED na High School Senior Equivalence Certificate)
Mihoatra ny 4 taona, araka izay enin-taona, ary anisan'izany ny,
Task Authority Skills fahaizana
antony manosika – %
Fiaraha-miasa – %
Laharana ho an'ny Hafa – %
Cultural toerany – %
mendri-pitokisana – %
Fanentanana ny Lalina – %
fahaleovan-tena – %
famoronana – %
Mampirisika ny tolotra ara-bola-, toy ny ohatra antoka, Levy, sy ny fampiasam-bola tari-dalana ny mpanjifa ny banky …